Vula umnxeba · Yiya undifunele · Indawo yokuGcina i-Black Trans Interactive · Oyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
Yiya kundifunela uLondolozo oluMnyama oluDityanisiweyo
kunye noDanielle Brathwaite Shirley
Yiya kundifumana yindawo yogcino lwedijithali yabantu abaMnyama iTrans eyenzelwe nguDanielle Brathwaite-Shirley. Siphefumlelwe ngumdlalo okwi-Intanethi (iiMMORPG's) sifuna ukurekhoda ubufundisi kunye nemibuzo abantu abamnyama abadlulayo xa behlola i-intanethi: Ukufuna ukumelwa, ukukhangela iiHormones, ukukhangela imbali yabo, ukudala amaqela ukuba abambe indawo yabanye, ukulwa neetrolls, njl. .
Lo mnxeba uvulekileyo ngowakhe nawuphi na umntu oMnyama noTrans. Amava akho anele. Awudingi ukuba ube ngumculi okanye unayo nayiphi na into yobugcisa.
Sijonge abantu abali-10 boTshintsho oluMnyama ukuba babe yinxalenye yale projekthi. Uya kuba nenxaxheba kuthotho lweendibano zocweyo eziqala ngoSeptemba. Ukusuka koomasifundisane, ugcino luya kwenziwa. Bonke abathathi-nxaxheba baya kuhlawulwa ukuze babandakanyeke.
Ukujoyina, nceda thumela i-imeyile ku: daniellebrathwaitesiteshirley (at) gmail.com
Abantu abaMnyama abaDlulayo banembali yokucinywa. Oovimba abasilele ukuqokelela nakuphi na ukurekhodwa kokuqala kwembali yethu. Rhoqo indlela abantu abagqithiswayo abagciniwe ngayo iqinisa okanye iziko lobundlobongela esiye sabuva ngeli xesha siphila kulo. Indawo yokugcina egcina amava amnyama okuTshintshana kufuneka alumke malunga nokungabuyeli emva kunye nokwenzakala okuphakathi. Oovimba abenziwe ngabantu beTrans ngabantu beTrans banokusenza sikwazi ukurekhoda ngokuchanekileyo ubukho bethu. Ukwenza uvimba wethu wogcino-mpepha kusivumela ukuba sisebenzise iindlela ezahlukeneyo zokugcina izinto ukurekhoda ngokupheleleyo umbono wetrans.
Ndiyakholelwa kumandla eentsomi kunye nesandi sokurekhoda izinto zobukho bethu ezingenakurekhodwa. Sigqibile ukubeka amandla obomi bethu ezandleni zabo bangababuqondiyo ubukho bethu kwaye badla ngokugxila kuphela kwingxaki yethu. Ukufikelela koovimba kwakhona yinto endicinga ngayo rhoqo. Singenza njani ukuba iindawo ezigcina ulwazi zifikeleleke Sikunciphisa njani ukufikelela ukuba iinjongo zokusebenzisa ugcino zibi? Ukwenza uvimba othathela ingqalelo umntu omsebenzisayo, kunye nendlela ayisebenzisa ngayo, kunokwenza ukuba abantu bafunde kumava abo kwaye yahluke njani kwabo beva kubo. Injongo yale projekthi kukudala indawo yokugcina izinto ezithandekayo erekhoda iincoko ezikwindawo emnyama ye-intanethi, ukuququzelela, ukuzisa iindawo ezibandakanya wonke umntu ngaphandle kweintanethi kunye nokhathalelo ngentsomi.
Ngothotho lweeworkshops siza kuyila ii-avatat zokumela abo babandakanyekayo, siqhube udliwanondlebe, senze isandi sendalo esingqongileyo. Iprojekthi yokugqibela iya kuba yindawo yokugcina izinto ezinokubanjelwa zombini kwi-intanethi nangokomzimba. Iindawo ezahlukeneyo kunye neencoko ngaphakathi kugcino ziya kufikeleleka ngokuxhomekeke kubuni bakho kunye nokukhetha ngaphakathi kuyo. Ayilulo lonke uvimba olunokufikeleleka kumbukeli nangaliphi na ixesha.
Yiya kundifumana yinxalenye yokugxilwa kweOyoun kwikharityhulam: IITESHINI EZIMISELWEYO